Icjaaska Cilmiga ah ee Quraanka | gaaldiid
Ku tabarruc! BOGGA HORE
Icjaaska Cilmiga ah ee Quraanka
Home > Icjaaska Cilmiga ah ee Quraanka	Mucjisada tiro ee Quraanka [Onkod]
Mucjisada Tiro ee kalimada Onkod kusoo aroortay Quraanka Kariimka, akhriso adiga yaabi doona waynida Quraanka!!!
Daawo ama Akhriso Caaro biyoodka guriga ay dhisato!
Mulxidiinta iyo Gaaladu waxay lamid yihiin sidii kuwo ku nool guri caaro oo aan roob, dabay, kulayl iyo qabow toona celinayn.
Mucjiso Nabigu ka warramay oo la arkay!!
Daawo ama Akhriso mucjiso la yaableh oo nabigu kawarramay, dadkana u muuqatay lana arkay. dhul saxare ah oo isu badalaya doog iyo cagaar.
Cilmiga Nafsaaniga ah ee kusoo arooray Suurada Maryama. Waa xikmad Rabaaniya oo ay ku duugantahay macluumaad cajiiba...
Mucjiso nabigu ka warramay, Xayawaano iyo Kabo hadlaya!
Mucjiso Nabigeenu ka warramay oo dhacday, xayawaano la hadlaya bani aadamka, kabo hadlaya iyo usha lagu tukabo oo hadlaya.
Mucjisada 1 aad: Atomka waa laga sii yaryahay. Bismillah: Waagii hore dadku waxay rumaysnaayeen in walaxda ugu yar walxaha inay Atom, hase ahaatee waxa cadaatay in fikradaasi qaldanayd. Maanta waxaynu ognahay in walaxdu ka...
Mucjisooynka tiro ee Asxaabul Kahfi
Mucjisooyinka Qur’aanka Kariimka ah oo aan dhamaanayn ayaa dhowaan daaha laga qaaday arrin cajab galisay cid kasta oo akhrisatay ama daawatay. Marka koowaad Suurada 18 aad ee Kahfi oo ka mid ah suuradaha Quraanka...
Mucjisada sida Rabi u abuuray ilmaha?
Mucjisada Quraanka ugu wayn ee tan iyo hada la gaadhay waa cilmiga Embryology oo ah cilmiga ilmaha ku kora caloosha hooyada.
Mucjisada iftiinka Qorraxda iyo Dayaxa
Mucjisooyinka ilayska Qorraxda iyo Dayaxa! Muxuu Quraanku ku sheegay labadaas iftiin? Nabi Muxamed waa nuur waana siraad
Sayniska iyo Quraanka [Damqashada Xanuunka]
Damqashada Xanuunku waxay ku taala Haraga Bani-Aadamka. Waagii hore Dadku waxay rumaysnaayeen in Damqashada Xanuunku ay ku koobantahay oo kaliya Maskaxda Bani-Aadamka. Hase ahaatee dhowaana waxa la ogaaday in Maqaarka ama haragu ay leeyihiin nerfayaal...